Panfrost yatove ne OpenGL 3.1 inotsigira Mali GPUs | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veCollabora havana kumira kushanda uye ndezvekuti mumwedzi yapfuura vakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye panguva ino hazvisi izvo nekuti nguva pfupi yadarika akazivisa kuti akazivisa kuitiswa muPanfrost mutyairi weOpenGL 3.1 rutsigiro yeMidgard GPUs (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) uye Bifrost GPUs (Mali G3x, G5x, G7x), pamwe neOpenGL ES 3.0 inotsigira Bifrost GPUs.
Idzi shanduko inotarisirwa kuverengerwa mukuburitswa kweMesa 21.0, iyo parizvino iri muchikamu chekutanga chemukwikwidzi.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti Collabora vagadziri vakashanda kwenguva yakareba pakuitwa kwevatongi vematafura uye muenzaniso weizvi ndezvekare Gallium tafura yepamusoro petafura, iyo inoshandisa yepakati nepakati kuronga OpenCL 1.2 uye OpenGL 3.3 API nezve vatyairi vane DirectX 12 (D3D12) rutsigiro uye kuti yavo kodhi kodhi inosunungurwa pasi peMIT rezinesi.
Iye akarongedzerwa controller inokutendera iwe kushandisa Mesa pane zvishandiso izvo zvisiri kutanga zvinowirirana neOpenCL uye OpenGL uye zvakare sekutanga chinzvimbo chengarava OpenGL / OpenCL kunyorera kushanda paD3D12.
Padivi remutyairi wePanfrost mutsva, zvinoonekwa kuti GPU Midgard neBifrost vanogovana zvakajairika data zvimiro yezvinhu zvakagadziriswa, asi Bifrost inoshandisa seti yakasarudzika yemirairo, izvo zvinoita kuti kuwiriranisa kuitiswa kwekushanda kweiyo GPU dhata kunetse.
Dhizaini, Bifrost inogovera mazhinji ayo akagadziriswa-dhizaini dhizaini neMidgard, asi inounza seti nyowani yemirairo. Basa redu rekuzivisa OpenGL ES 3.0 kuBifrost inoratidza kupatsana uku.
Zvimwe zvakagadziriswa-basa maficha, senge kusimbisa uye kushandura mhinduro, yakashanda pasina chero yakatarwa Bifrost shanduko, sezvatakaita kare kuMidgard Zvimwe zvinovharidzira maficha, senge yunifomu buffer zvinhu, zvinoda "kubva pakutanga" kumisikidza muBifrost compiler, basa rakareruka nemumiriri weanomiririra wepakati anomiririra neyekutanga-kirasi kuvaka rutsigiro.
Somuenzaniso, iwo akasarudzika mabasa akatoitwa kare Midgardsenge 'shanduko mhinduro', inogona kuendeswa kuBifrost pasina shanduko, nepo maficha akaita seMazhinji Render Chinangwa (MRT) akaganhurirwa kune mamwe chaiwo Bifrost shanduko.
Panguva imwecheteyo, mamwe mashandiro mashandiro, senge akabatana buffer zvinhu, zvinoda kukwenya kuita kweBifrost shader compiler.
Izvi zvinotevera OpenGL ES 3.0 rutsigiro muMidgard iyo yakauya pamusoro pezhizha, pamwe nekutanga rutsigiro rweOpenGL ES 2.0 iyo ichangoburwa yeBifrost. OpenGL ES 3.0 ikozvino yaedzwa paMali G52 mukubatanidzwa kweMesa kuenderera, ichiwana 99.9% yekupasa mwero mune inoenderana bvunzo yeDrawElements Quality Chirongwa.
Nekudaro, zvimwe zvinhu, senge akawanda ekupa zvinangwa, zvaida yakatarwa kodhi kubva kuBifrost ichitora imwe kodhi yakagovaniswa neMidgard. Zvakadaro, basa rakafambira mberi nekukurumidza zvakanyanya kechipiri kechipiri kutenderedza, chiratidzo chesimba remakodhi akagovaniswa. Asi iwe haufanire kudzora yako swap kune chete Panfrost GPUs; Vhura masosi madhiraivha anogona kugovana kodhi pakati pevatengesi.
Uye zvakare, muchiziviso zvinotaurwa izvo kumwe kudzokororwa kwebasa kwakadzivirirwa nekushandisa iyo yepakati inomiririra mune iyo compiler, iyo, pamwe chete nekodhi yakagovaniswa, inomhanyisa kusimudzira uye neiyi nzira, iyo kodhi inogona kushandiswa kwete chete kune yemhuri yeGPU, asiwo kune akasiyana madhiraivha.
Kunyanya, ivo vanogadzira vanotaura kuti kuitira kuita OpenGL pane masisitimu edesktop, mutyairi wePanfrost aida kushandiswa kwezvinhu zvakagadzirira kushandisa Mesa, nepo mutyairi weMali achingogumira pakutsigira OpenGL ES chete.
Nekudaro, desktop OpenGL 3.1 rutsigiro runenge "rwemahara" kwatiri seanokwira kumusoro Mesa controller nekushandisa zvakajairika zvivakwa.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyo nyowani Panfrost kuitiswa kwakatsanangurwa neveCollabora vanogadzira, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Panfrost ikozvino ine OpenGL 3.1 tsigiro yeMali GPUs